Blender 2.83 otu LTS nke na-eweta mgbanwe dị mkpa | Site na Linux
Blender 2.83 otu LTS nke na-eweta ọtụtụ mgbanwe dị mkpa
Ọ dị ugbu a ibudata ma wụnye nke atọ melite nke ugbu a alaka nke Blender 2.8x, nke a bụ ụdị ọhụrụ "Blender 2.83" nke pụrụ iche, n'ihi na ọ bụ ụdị nke nwere nkwado ogologo oge (LTS). Ya mere, ụdị a ga-enwe mmelite na mmezi ahụhụ maka afọ abụọ.
Na ngụkọta Blender 2.83 na-ewetara ihe mmezi 1,250, nkwado maka ibubata faịlụ OpenVDB, nkwado maka OpenXR, na-ewepu mkpọtụ ozugbo na nlele ọrụ site na iji cycles na-enye injin ekele gaa NVIDIA OptiX, imegharia nke Griiz Pencil, EEVEE engine ndozi, mmelite arụmọrụ na ndozi usoro vidiyo.
Kedu ihe dị ọhụrụ na Blender 2.83
Newdị ọhụrụ a nke Blender Na-ewebata Nkwado OpenXR nke izizi maka Eziokwu Virtual, nke a na-ejedebe site na ikike inyocha ihe nkiri 3D site na iji isi okwu VR ozugbo na Blender. Nkwado dabere na mmezu nke ọkọlọtọ OpenXR, nke na-akọwa API zuru ụwa ọnụ maka ịmepụta ngwa ngwa na ngwa ngwa abawanye, yana usoro nke maka ịmekọrịta kọmputa nke na-achikota njirimara nke ngwaọrụ ụfọdụ.
Ihe ọzọ dị mkpa nke nsụgharị a bụ iwebata NVIDIA OptiX, un mkpọtụ mbelata algọridim Maka nsonaazụ ọkụ (dị ka nke a na-eme site na Cycles), ị nwere ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ gị, na-enweghị mkpọtụ ọ bụla.
Na akụkụ nke animation toolset, 2D Gris Pencil anatala idegharị na nkwalite njikọta na Blender, yana ịrụ ọrụ. Karịsịa, ị nwere ike iji ụzọ gị si ejizi ihe site na Gris Pencil dị ka a ga - asị na ha bụ ụdị. Ọzọkwa, ụzọ ọ bụla nwere ike inwe agba dị ka ọ masịrị gị.
Mgbe nọ Ugbu a enwere ike ịhụchalụ usoro dị iche iche nke nsụgharị. N'oge a, arụmọrụ a na-akwado ikuku, nkịtị, omimi (foogu), na mkpuchi nzuzo. Ọzọkwa, enwere ike iji ihe ndị na-egosipụta uzo na mpịakọta (dịka ọkụ).
Ọzọkwa, ụdị nke Blender 2.83 a na-enye mmelite ọhụrụ na arụmọrụ ọkpụkpọ. Ugbu a Nwere ike ịtọ ọnụọgụ na ọdịdị nke ọkpụkpọ akpụ akpụ iji mepụta usoro oge niile. Ọzọkwa, ịnwere ike iji ụgbọ elu abụọ n'otu oge iji mepụta ọnụ ọnụ dị elu n'etiti ụgbọ elu abụọ ahụ.
Enwere ike ịgbanwe topology site na ịgbaso mmegharị nke ahịhịa. Ọzọkwa ugbu a nwere ike ikpokọta ihe nkpuchi, e degharịrị ndị na - emegharị ahụ iji gbanwee na ngwa ngwa, mmegharị ngwa ngwa na - enye nsonaazụ anya dị mma. Na njedebe, nke a ideghari ejiriwo ọtụtụ faịlụ griizị Pencil rụọ ọrụ okpukpu abụọ.
N’ụzọ doro anya, a banyekwara na “Gris Pencil” Karịsịa, agbakwunyela ndị na-emezi ụzọ ọhụrụ. O nwekwara ike ịmepụta polygon site na ụzọ.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile, interface onye ọrụ zuru ụwa ọnụ enwetawokwa ndozi, gụnyere ịgbakwunye ihe ndabere ndabere mgbe ịpịrị mpụga nke gizmo ma ọ bụ tinye mgbakwunye gizmos na nchịkọta nchịkọta UV.
Na nsụgharị engine n'akụkụ EEVEE, ugbu a enwere ike ịme nsụgharị nsụgharị, dị nnọọ ka anyị ga-eme na Cycles. Ọzọkwa, a na-echekwa oghere nyocha echiche ugbu a na maapụ cube ma anaghịzịkwa ebute ihe. Enwere ike iji ntọala dị elu iji belata nsogbu na ụdị dị oke na geometries ntutu ugbu a na-akwado nghọta.
Versiondị 2.83 a na-enye arụmọrụ ndozi: rewinding bụ nnọọ ngwa ngwa, ihe ọkpụkpụ mode nwere a ọhụrụ nhọrọ iji belata ọnụ ọgụgụ nke ndịna window windo, collisions na ákwà anwale bụ ugboro ise ngwa ngwa.
Onye na-eme vidiyo ahụ enwetakwala mmụba dị ịrịba amakarịsịa na njirimara onye ọrụ ma nwee ogwe ngwaọrụ ọhụụ nke na-eme ka ọ dị mfe iji ma na-enye ohere ndozi arụmọrụ. A ga-enwe oghere dị ọhụrụ na diski, ịhụchalụ opacity na ọdịyo na ngalaba, ndị na - eme nke ọma iji chịkwaa ngalaba.
N'ikpeazụ ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na-enwe ike inweta ọhụrụ version, i nwere ike ime ya si njikọ na-esonụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Blender 2.83 otu LTS nke na-eweta ọtụtụ mgbanwe dị mkpa
Linux kernel 5.8 ga-abịa na ọtụtụ mgbanwe na RC1 dị ugbu a
KDE Plasma 5.19 rutere na mmelite maka ihe ndị na-arụ ọrụ na Desktọpụ, Wijetị na More